Ogaden News Agency (ONA) – Filimkii oohinta Qarsooneyd (Silent Cry Part 2) oo lagu daawaday Wadanka Sweden.
Filimkii oohinta Qarsooneyd (Silent Cry Part 2) oo lagu daawaday Wadanka Sweden.
Sawiradi Dib kala soco:
25-kii feb 2012-kii waxaa lagu soo bandhigay caasimada dalka Sweden Stockholm Film-kii Silent Cry (oohintii qarsoonayd) qaybtiisii 2-aad.
Ugu horayntiiba waxaa qud bad yar oo soo dhaweeyn diirana madasha kasoo jeediyay Xog-Hayaha OYSU Sweden Mudane Mahamed Amiin Barkhadle, Kadib waxaa si toosa looguda galay daawashada film-ka.
Film-ka oo ah mid lagasoo duubay shacabka dulman ee masaakiinta ah ee ay xad gudubyada ba’an sida jidh dilka, kufsiga, dilka, dhaca & xadhiga u gaystaan xukuumada Tigreega Ethiopia ayaa si waafiya shaaca looga qaaday.
Film-ka oo ahaa mid murugo badnaa ayaa waxaa lagusoo bandhigay bartamaha magaalada Stockholm kana soo qayb galeen dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Stockholm & gobalada kale waxaana kasoo qeybgalay ururobadan oo taageera halganka Ogadenia.
Dhibaatooyinka shacabka Ogadenia oo kolba isa soo taraya ahna wax aanan marnaba la qarin Karin ayaa waxaay ku idlaayeen filmkan oo taabanayay meelo badan- bulshadii daawanaysayna ka wada ilmaysiiyay oo ay sababtay in ay qaarkood daawanba kari waayeen kolka ay arkeen sida loo dhibaateeyay umada masaakiinta ah ee aanan waxba galabsan kana soo barakacay dhulkoodii.
Bishan February oo ah bil dhamaan aduunka dacaladiisa ay ururka OYSU ka xuseen maalinka xasuuqa Ogadenia oo ah maalin murugo, lama ilaawaana ku noqotay umada reer ogadenia ayuu wadanka Sweden/Stockholm & Minneapolis, Minnesota nasiib u yeesheen inay noqdaan kuwii ugu horeeyay ee soo bandhigay Silent Cry Part 2.
Sikastaba ha ahaatee wax filim-kii la daawadaba oo laga murugoodo dhibaatooyinka araxan daro ee loogaysto shacabka dulman ee S/Ogadenia ayaa waxaa cod baahiyaha lagusoo dhaweeyay Mudane Mujahid Sh Ibrahin oo ah masuulka ugu sareeya ururka OYSU ugana soo kicitamay dalka UK munasabadan darted ayaa soo jeediyay qudbad aad u dheer taabanaysayna meela badan dadkana qiira galisay shacuurtoodiina sii kicisay. Asagoo walibana dhalinta uga digay wax yaala badan oo ay cadawga maleegaan kuna dhiira galiyay siday dhamaan uga qayb qaadan lahaayeen halganka xaqa ah. Mudane Mujahid oo hadalkiisa sii wata ayaa dhalinta kula dardaarmay ku dhaqanka xeerka ururka, ka run sheegida mabaadii’da’ururka & walibana fulinta awaamiirta asagoo u dul maray waxa xeerka uu qabo & waxa ka reeban intaba.
Kadib waxaa lagusoo dhaweeyay gabadh da’a yar Sharezad Faysal Gas oo ka soo jeedisay gabay wadaniya oo ay ku qortay afka swedhishka, waxaa sidoo kale ayana gabay qiima badan oo ingriis ah kasoo jeedisay Marwa Layla Abdulahi oo ah masuul ka tirsan OYSU Sweden.
Sidoo kale Xog-Hayaha OYSU Sweden faraca Flen Marwa Faduma Abdirahman ayaa ayana kasoo jeedisay geeraaro wadaniya kuwaasoo ahaa kuwa badalay dhamaan dareenkii dad weynaha oo aad loola qiirooday.
Waxaa sidoo kale hadala kooban oo aad u qiima badan goobta ka tidhi Khadija Ahmed oo ah gabadh da’deedu tahay 12-jir, Khadiija waxay qiratay ugu horayn inay farxad u tahay kasoo qayb galkii ay daawashada filmka kasoo qayb gashay, waxay sidoo kale qiratay inay aad uga xuntahay dhacdooyinka foosha xun ee ay indhaheeda ku aragtay misna loo gaysanayo shacabka S/Ogadenia,
Sidaa darteed Khadiija waxay balan qaaday inay wax u qabanayso umadeeda una aarayso mustaqbalka insha-allaah!
Guntii & gunaanadkii barnaamijkii film-ka ayaa soo gabagaboobay ayadoo dadkii ay shacuurtooda aad u kacsantahay kadibna ay qaarkood safaraday ku yimaadeen ay dib u galeen.